किन खुम्चिँदै छ खाडीको श्रम बजार ? | नेपाली पब्लिक किन खुम्चिँदै छ खाडीको श्रम बजार ? | नेपाली पब्लिक
नेपाली पब्लिक २०७६, १ श्रावण बुधबार ०९:५७
काठमाडौँ – नेपालसहित दक्षिण एसियाको मुख्य रोजगारी क्षेत्र मानिएको खाडीका ६ वटा देशमा श्रम बजार खुम्चिँदै गएको छ । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई, ओमन, कुवेत, कतार र बहराइनमा रोजगारको अवसर घट्दै गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा विदेश जाने नेपाली कामदारको संख्या १६।९५ प्रतिशतले कम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा ती देशले ठूल्ठूला नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति चाहिने र सहज हुने प्रकृतिका क्षेत्रमा आफ्नै नागरिकलाई रोजगार दिने नीति उनीहरूले लिएका छन् ।
सरकारले टिकट र भिसा शुल्क कामदारबाट लिन नपाउने नीति लागू भएको आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा नेपालबाट साउदी अरब एक लाख ३४ हजार गएका थिए । त्यसपछिको वर्षमा झन्डै आधा कामदार मात्रै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा ७२ हजार, २०७४र७५ मा ४० हजार गए । गत आर्थिक वर्षमा ४६ हजार कामदार गएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ हजारले बढेको हो । यही अवधिमा भारतबाट साउदी अरब जानेको संख्या पनि घटेको देखिन्छ ।
२०१५ मा ३ लाख भारतीय कामदार गएका थिए । त्यसपछिका तीन वर्षमा क्रमशस् एक लाख ६५ हजार, एक लाख ४९ हजार हुँदै ६५ हजारमा सीमित भएको छ । बंगलादेशबाट सन् २०१५ मा ५८ हजार गएका थिए । त्यसपछि लगत्तैको वर्षमा बढेर एक लाख ४३ हजार गएका थिए । जुन वर्ष नेपालबाट जानेको संख्या आधामा झरेको थियो ।
पाकिस्तानबाट सन् २०१५ मा ५ लाख २२ हजार गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशस् ४ लाख ६२ हजार, एक लाख ४३ हजार र एक लाख कामदार साउदी अरब गएका छन् ।
छिमेकी देशको हवाई र सडकबाट नाकाबन्दी खेप्दै आएको कतार जाने नेपाली कामदारको संख्या पनि घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा एक लाख २७ हजार नेपाली गएकामा त्यसपछि क्रमशस् एक लाख २१ हजार, एक लाख र गत वर्ष ७५ हजारमा सीमित भएको छ ।
यही समयमा भारतबाट जानेको संख्या पनि घटिरहेको छ । भारतबाट सन् २०१५ मा ५९ हजार कामदार गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशस् ३० हजार, २४ हजार गए । सन् २०१८ मा ३२ हजार मात्रै कामदार गए ।
बंगलादेशबाट सन् २०१५ मा एक लाख २३ हजार कामदार गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशस् एक लाख २० हजार, ८२ हजार जना गए । गत वर्ष २०१८ मा ७६ हजार कामदार मात्रै गएको पाइएको छ ।
पाकिस्तानबाट जानेको संख्या भने केही बढेको छ । सन् २०१५ मा १२ हजार कामदार कतार गएका थिए । त्यसपछिका तीन वर्षहरूमा क्रमशस् ९ हजार, ११ हजार र २० हजार गए । कतारले पाकिस्तानी नागरिकलाई कतारी प्रहरीमा भर्ती गर्नुका साथै विश्वकप फुटबलका लागि रंगशाला निर्माणमा संलग्न गराउने नीति लिएकाले पाकिस्तानीको संख्या बढेको हो । पाकिस्तानीले कतार जान प्रति व्यक्ति ४० हजार रियालसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् ।
नेपालबाट यूएई जाने संख्यामा भने थोरै भए पनि सुधार आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा ५२ हजार नेपाली यूएई गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशस् ५७ हजार, ६० हजार र आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ६२ हजार जना कामदार गए । भारतबाट जाने कामदार संख्या भने घटेको घटयै छ । सन् २०१५ मा २ लाख २५ हजार यूएई गएका थिए । त्यसपछि क्रमशस् एक लाख ६३ हजार, एक लाख ४९ हजार, एक लाख भारतीय त्यहाँ गए । बंगलादेशबाट सन् २०१५ मा २५ हजार कामदार यूएई गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशस् ८ हजार, ४ हजार हुँदै ३ हजारमा सीमित भएको छ ।
घरेलु कामदारको वर्चस्व रहेको कुवेतमा कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा ९ हजार नेपाली कुवेत गएका थिए । त्यसपछि बढेर १३ हजार हुँदै १७ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १५ हजार पुगेको छ ।
कुवेत जाने भारतीय संख्या पनि घटेको छ । सन् २०१५ मा ६६ हजार भारतीय कुवेत गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशस् ६६ हजार, ७२ हजार, ५६ हजार जना गए । सन् २०१८ मा ३२ हजार मात्रै गएको पाइएको छ ।
कतारमा साउदी, यूएई र बहराइनका नागरिकद्वारा सञ्चालित कम्पनीहरू बन्द भएका छन् । ‘जुन कम्पनीको साहू ९स्पोन्सर० परिवर्तन गर्न सफल भयो, ती सञ्चालन भएका छन् । जसको साहू परिवर्तन भएन ती बन्द भए,’ खाडीका एक नेपाली राजदूतले भने, ‘झन्डै डेढ वर्षमा हजारौं नेपालीको रोजगारी गयो ।’
साउदीमा १२।९ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन् । जसका कारण साउदीले निजी क्षेत्रका स–साना कम्पनीमा समेत साउदी नागरिकलाई अनिवार्य रोजगार दिनुपर्ने नीति लिएको छ ।
यसले नेपालीसहित आप्रवासी नागरिकको रोजगारीमा कटौती भएको हो । सन् २०१७ देखि नै लागू हुने गरी भिसा शुल्कमा उच्च वृद्धि गरेपछि कम्पनीहरूले विदेशी श्रमिक कटौती गर्न थालेका छन् । एक विदेशी श्रमिक राखेबापत कम्पनीले साउदी सरकारलाई प्रतिमहिना चार सय रियाल ९करिब १२ हजार रुपैयाँ० शुल्क बुझाउनुपर्छ । जसले गर्दा विदेशी श्रमिक ल्याउन कम्पनीमाथि थप भार परेको छ । एक वर्षअघिबाट बिजुली, पानी र ऊर्जामा मूल्य बढाएपछि विदेशी श्रमिकको आकर्षण विगत जस्तो रहेन ।
खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासहरूले प्रमाणीकरणको जिम्मा दूतावासलाई मात्रै दिन सरकारलाई सुझावरसिफारिस गर्दै आएका थिए । यसअघि दूतावासलाई विकल्पका रूपमा मात्रै हेरिएको थियो । रोजगारदाता कम्पनी वा म्यानपावर कम्पनीले ‘चेम्बर अफ कमर्स’ बाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराए पुग्थ्यो । साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतका अनुसार यसका तत्काल देखिने फाइदाहरू छन् । ‘दूतावास र कम्पनीबीच सिधा सम्पर्क कायम हुन्छ ।
श्रमिकको पहिलो महिनाको तलबको आधा रकम मात्रै म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कका रूपमा त्यो पनि रोजगारदाता कम्पनीबाट पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । व्यवसायी भने एक महिनाको तलब दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो समाचार कान्तिपुरले छापेको छ।
एएफसी यू-२३ छनोटमा नेपाल र…
नेपालले आज ओमानसँग सामना गर्दै